399s ဘလွန်းဘက်ဂ်ကို Instagram လွှမ်းမိုးမှုများ ၀ ယ်နေသည့်အပေါ် Gutfeld images and subtitles
>> Greg: Michael Bloomberg >> Greg: မိုက်ကယ်ဘလွန်းသည်လူများကိုခေါ်ရန်ငွေပေးချေသည် ပုံမှန်အားဖြင့်လူအများအားငွေပေးချေရန်ဝန်ခံသည် INSTAGRAM တွင်ပုံမှန် MEM များတင်ရန်သြဇာညောင်းသူများ။ INSTAGRAM အပေါ် MEMES ။ လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဘာလဲ။ လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဘာလဲ။ အိုင်တီကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့်အရာ ဘယ်သူမှမခေါ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပါ မည်သူမျှယခုအချိန်တွင်သူတို့လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အတူဘယ်သူမှဖြစ်ကြ၏ တစ် ဦး လူမှုရေးမီဒီယာအပြာရောင်ပုံနှိပ်နှင့်အတူဘယ်သူမှ အပြာရောင်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နားထောင်ရန် နားမလည်နိုင်အောင်နားထောင်ပေးဖို့။ သူတို့ကို။ ဒါပေမဲ့သူကအမှန်တရား, ပင် WHO ကလူ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်၊ စိတ်ကူးယဉ်သူမည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည် FASHION သည်ခေတ်မှီသော HIPSTERS များအနေဖြင့် A မှငွေကိုယူလိမ့်မည် HIPSTERS သည်ဘီလီယံနာသူတစ် ဦး ထံမှငွေကိုယူသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘီလီယံနာသူ၊ သောအနည်းဆုံးအစီရင်ခံစာ၏ ဒီနည်းကိုဒီကိစ္စကို၏အနည်းဆုံးအစီရင်ခံသတင်းများ။ ဒီနည်းကိုဒီကိစ္စကို၏ဇာတ်လမ်း။ အလေးအနက်ထား, ဘယ်လိုကောင်းပြီ Trump အလေးအနက်ထားရလျှင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတွက်ကောင်းကျိုးကိုမည်သို့ရရှိနိုင်သနည်း။ နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတွက်လား သူသည်မိမိအသစ်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည် သူသည် POSH အတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောငွေများပေးရန်သူ၏အသစ်သော NEMESIS ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည် POSH အဖြစ်အပျက်များ၊ Perks နှင့်စျေးနှုန်းများအတွက်သန်းပေါင်းများစွာပေးဆပ်ရန် NEMESIS အဖြစ်အပျက်များ, PERKS နှင့်စျေးနှုန်း။ ဝန်ထမ်းများ Trump - အားလုံး STORMING ကဲ့သို့ဖြစ်၏ Trump - အိုင်တီအားလုံးကိုကျော် Storming ကဲ့သို့။ ထပ်။ ဒါပေမဲ့ Trump ကအိုင်တီရစေတယ်, သို့သော်အပြင်းအထန်အိုင်တီလုပ်နေတာ, ဟုတ်တယ်လား? ညာဘက် DOUG? >> ငါတစ်စုံတစ်ယောက်ကဲ့သို့သောဂုဏ်ယူပါတယ် >> ငါကဲ့သို့သူ၏တစ်စုံတစ် ဦး ကသူ၏အချိန်ဖြုန်းနေသည်ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့် သူ၏အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုအမေရိကသို့ယူဆောင်လာရန်ကြိုးစားနေသည် AMERICA အတူတကွယူလာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ အတူတကွ။ >> Greg: ပျော်ရွှင်သောယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိ၏။ >> Greg: ပျော်ရွှင်သောယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိ၏။ သူထံမှအဘယျသို့အိုင်ဒီ BLOOMBERG မှသူမည်သို့ရရှိနေသည်ကိုမသိပါ၊ သို့သော်အိုင်တီတစ် ဦး နှင့် တွဲဖက်၍ ကြည့်ခြင်း Bloom, သို့သော်အိုင်တီစည်းချက်တွေအများကြီး။ အများကြီး။ သူ၏ကောငျးသောအရင်းအနှီးရဲ့။ သူ၏ကောငျးသောအရင်းအနှီးရဲ့။ သူ၏မကျြမှောကျ၌သူ့ကိုမြင်၏ သူ့ကိုကြည့်နေတုန်းပဲ, သူ့တစ် ဦး ၏ညွှန်ကြားချက်၌သူ၏ FORTUNE ONCOMING ORANGE TORNADO ၏လမ်းညွှန်မှုတွင် FORTUNE ။ အော်ပရေတာ Toronto ONCOMING ။ သူသည်နံနက် Joe ရပြီ HE နံနက်ခင်းပြန် Joe နှင့် Jeff ZUCKER ရရှိခဲ့ပါပြီ ကြီးလေးတဲ့အသက်တာကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် Jeff ZUCKER ပြီးတော့သူတို့ရပြီ LIFTING သူတို့ HERNIA အမာရွတ်များအဲဒီလိုသူတို့ကိုသက်သေပြခဲ့သည် HERNIA ကဒါကိုသက်သေပြဖို့အသည်းအသန်ကြိုးစားခဲ့တယ် ပြောဆိုရန် INSTAGRAM တွင်လူကြီးများအားငွေပေးချေရန်စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပါ STUPID STUFF ကိုပြောရန် INSTAGRAM တွင်လူကြီးများ။ မိုက်မဲပစ္စည်း။ ထို့အပြင်ဥက္ကES္ဌအနိုင်ရ သမ္မတကိုလည်းအနိုင်ယူတယ်၊ အမှန်။ တစ် ဦး က Trump စီးပွားရေး, မြင့်တက် စီးပွါးရေးတိုးပွားလာသောဒီရေတက်ချိန်တွင်လှေများနှင့် ၀ ယ်သူအားလုံးကိုထမြောက်စေသည် ဒီရေသည်လှေအားလုံးတက်ပြီးသင်အနည်းငယ်ရွက်လှေများကို ၀ ယ်ယူသည်။ သင်အနည်းငယ်ရွက်လှေ။ Dana, ငါတို့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်, Dana, ငါတို့သေးငယ်တဲ့လူဖြစ်ကြ, ငါတို့မဟုတ်လော ငါတို့လား။ >> Dana: အနည်းငယ်သောကိုက် >> Dana: အနညျးငယျ BIT တွင်အနည်းငယ် BIT ။ အတိုချုပ်။ >> Greg: BEING ကျနော်တို့ KNOW သော >> Greg: ငါတို့သိသောငါတို့အကြောင်းကိုသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးမထားခြင်း မိမိအမြင့်အကြောင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်သိက္ခာ, ငါတို့တစ် ဦး သို့လှည့် အမြင့်, ငါတို့တစ် ဦး စူပါပါဝါသို့လှည့်မှန်? ညာဘက်, စူပါပါဝါ? သင် TIM O'Brien ON ခဲ့။ သင် TIM O'Brien ON ခဲ့။ >> ဒါန: THE Bloomberg မှ >> Dana: BLOOMBERG ကုမ္ပဏီမှအကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်နှင့် အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ကျွန်မသူ့ကိုအကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ သူ့ကိုအကြောင်းသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်။ >> Greg: ဒီတိပ်ကြီးထွားစေ။ >> Greg: ဒီတိပ်ကြီးထွားစေ။ >> Dana: ရောဂါလက္ခဏာခံစားချက်တစ်ခု >> Dana: ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကသူ့အမြင့်ဆုံးလား။ သူ့အရပ်လား >> Mike IS TRUMP အရာအားလုံး >> Mike သည်အရာခပ်သိမ်း TRUMP IN ၌၎င်း, TRUMP ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလဲ IN နှင့်ဘာလဲ TRUMP ဒီနည်းကိုအပေါ်ရိုက်နှိပ်။ ဒီနည်းကိုနှိပ်ပါ။ >> Greg: အနိုင်ပေး၏ Trump မျိုး >> Greg: အနိုင်ပေး၏ Trump အမျိုးအစားထိုသူအပေါင်းတို့ပြောနေတာကြောင့် ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိအမြင့်အကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည်။ သူ၏အမြင့်အကြောင်း။ နည်းဗျူဟာဆိုတာဘာလဲ။ နည်းဗျူဟာဆိုတာဘာလဲ။ >> ဒါန: ဒီနည်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် >> Dana: ဒီဘလူးဘာ့ဂ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူအခုသူဖြစ်နေလို့ပါ Bloomberg အကြောင်းယခုသူနေသောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုသခံရခြင်းကြောင့် ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းကဲ့သို့အိုင်တီအကြောင်းပြောနေတာကြောင့်ကုသလျက်ရှိသည် အားလုံးအကြောင်းအိုင်တီပြောနေတာနံပါတ်ထဲမှာရှေ့ပြေးကဲ့သို့ ရှေ့ပြေးသူသည်နံပါတ်များ၌အမှန်တကယ်မဟုတ်သော်လည်းအကြောင်းမှာ သူသည်အမှန်စင်စစ်မဟုတ်သော်လည်းဒီမိုကရက်စ်အားလုံး၏ကြောင့်ဖြစ်သည် ဤအရာအလုံးစုံ၏, ဒီမိုကရက်တစ်ယခုအချိန်တွင်တစ် ဦး အခွင့်အလမ်းကိုရယူခြင်း အခုအချိန်မှာ BLOOMBERG ပြောနေတာတာယာတွေကိုကန်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရပြီ ဘလွန်းဘာ့ဂ်ပြောနေသည့်တာယာသူတ ဦး တည်းဖြစ်နိုင်သည် သူအမှန်တကယ် IS TRUMP ကိုရိုက်နှက်နိုင်သူတစျခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် တကယ်တော့သူတို့ဘာတွေဂရုစိုက်သလဲဆိုတာကိုဖြတ်ပြီးရိုက်တယ်။ သူတို့ဘာတွေဂရုစိုက်သလဲ။ >> Greg: Bloomberg ပုံရသည် >> Greg: Bloomberg သည်သူ၏ငွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာသုံးစွဲရန်ပုံရသည် သူ၏ငွေကိုသူပေးနေသည့်အနေအထားတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာသုံးစွဲခြင်း သူပေးသောသဘောအရအထူးသဖြင့် blank စစ်ဆေးမှုများ သူကလိုလားနေသောကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ကွက်လပ်လေးစစ်ဆေးပါ လူတိုင်းကြောင့်သူ့ကိုဖြတ်ထွက်လာလိုသောကြောင့်။ ထွက်ပါ။ ဒါပညာရှိလား ဒါပညာရှိလား >> ကနေဒီ: သူ Trump ချင်တယ် >> ကနေဒီ: သူထွက်နိုင်ဖြတ်သူသမ္မတ SO PACED OUT, သူသမ္မတအရှိန်အဟုန်သူတို့နောက်သို့ကြည့်ရှုအများကြီး သူတို့ရဲ့နောက်သို့မျှော်ကြည့်နှင့်အများကြီးယနေ့ငါပဲ AND ့ယနေ့ FOR, ငါမသွားဘူးကိုငါကြည့်ရှုပါ သွားတော့မယ့်အရာကြည့်ကြည့်တော့ကျွန်မမှာဗိုက်ပူတယ်ဆိုရင်မသိဘူး ဒီအကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ဒီနည်းကိုယူရန်ကျွန်ုပ်တွင်အစာအိမ်ရှိရင်သိပါ ဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုယူပြီးတော့ဒီဗုံးကြဲလေပြီ၊ ဗုံးခွဲမှု, Old ဒေါသအမျက်ကြီး New Yorkers ၏စုံတွဲတစ်တွဲ။ နယူးယောက်။ ငါတစ် ဦး ကကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ငါထက်ငါအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာအငြင်းအခုံကြည့်ပါလိမ့်မယ် လူမှုရေးနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှု လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပြောင်းပြန်အရင်းအနှီးထို့နောက်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်အခြားစော်ကားမှုကို။ တစ်ခုချင်းစီကိုစော်ကားမှုနှစ်ခုယောက်ျားတစ်ယောက်။ ငါအစားကြည့်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခု ငါအလျင်အမြန်ကြည့်ရှုမယ်တစ်ခုမှာမြင့်သောဟာသပေမယ့်သော့ အမြင့်ပေမယ့်ငါ့ကိုပါပဲ။ ငါ သင်၏အသစ်သောအမည်ပြောင်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏အသစ်သောအမည်ပြောင်သူသည် BLUMER လား။ သူ့ကို, BLUMER? >> Greg: ငါအိုင်တီပြီးတော့ငါစတင်ခဲ့သည် >> Greg: ငါကတီထွင်ငါမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငါတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းငွေပမာဏကို GET ငါနေ့တိုင်း DOLLARS GET တစ်စုံတစ်ယောက်ကအိုင်တီပြောတယ်။ အိုင်တီပြောတယ် >> Jesse: ကျွန်ုပ်အကြောင်းစဉ်းစားနေပါတယ် >> Jesse: ငါ CAMEO အကြောင်းတွေးနေတယ်၊ CAMEO, လမ်းဖြင့်။ ပိုက်ဆံလိုတယ် ပိုက်ဆံလိုတယ် ဒီ MEMES FUNNY, ရှိသည် ဤအသင်းသားများသည် FUNY ဖြစ်ကြသည်, အင်တာနက်ကိုသွားရပြီ။ အင်တာနက်ပေါ်သွားပါ။ ဒီသီချင်းတွေအားလုံးကိုကြည့်ဖူးလား ဒီရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေဟာဟီရာရီယိုလို့မြင်လား။ ဟီလာရီ။ သငျသညျကိုဝယ်လျှင်အချက်များဖျက်သိမ်း အချက်များကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့် အကယ်၍ သင်သည်အမှတ်ကောင်းများကို ၀ ယ်ပါကသင်ကမအေးပါ။ အေးမြသောအချက်များ၊ သင်ကမအေးပါ။ ဒါပေမဲ့သူအသိအမှတ်ပြုသူမဟုတ်ခဲ့ပေ ဒါပေမဲ့သူအသိအမှတ်ပြုသူသည်အေးမြမဟုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူသည် COOL ဝယ်ယူခဲ့သည် အေးမြပြီးတော့သူက COOL တွေကိုဝယ်ပြီးသူရောင်းလိုက်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်တယ် ဒါကြောင့်သူရောင်းလိုက်တဲ့ဒီဂရီအချက်အလက်များပြည့်စုံစွာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာပါ။ တက် FUNNY BE ။ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, သူသည် Buzz မေးခွန်းကသူရရှိမယ့် Buzz သောလူဖြစ်ကြ၏ Buzz အပေါ်အခြေခံပြီးလူဖြစ်ကြ၏။ Buzz အပေါ်အခြေခံ။ လူတွေက BLOOMBERG သောက်ချင်တယ် လူတွေဘလမ်ဘာ့ဂ်နဲ့ SNIFF ကိုခုတ်ပြီးတာယာတွေကိုခုတ် သူ့ကို SNIFF နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးတာယာတွေကိုဆုပ်ပြီးသူ့ကိုထိလိုက်ပြီးသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် သူ့ကိုထိမိနှင့်သူ၏ခံစားရတယ်အခုအချိန်မှာသူစုစုပေါင်းရဲ့ အခုအချိန်မှာသူအကွောငျးမသိသောစုစုပေါင်းရဲ့သူသညျစတငျရနိုင်သလား မသိသောသူသည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် SUPER နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တူနိုင်သလား ဒီနေ့ခေတ်မှာလိုမျိုးဒီပိတ်ဆို့သူတွေဆိုတာဘာလဲ။ ဒီ Kandidates? ဒီနည်းကိုပိုက်ဆံအားလုံးနဲ့ဒီနည်းကို ဤသူအပေါင်းတို့သည်ပိုက်ဆံအပေါင်းတို့နှင့်ဒီနည်းကို HIP နှင့်ပြီးတော့မိနစ် အသံနှင့်ထို့နောက်မိနစ်ပိုင်းမဲဆန္ဒရှင်များမဲပေးစတင်, သူတို့ပျက်ကွက်။ မဲဆန္ဒရှင်များမဲပေးစတင်, သူတို့ပျက်ကွက်။ ဒါကြောင့်ငါသူသွားစဉ်းစားပါ ဒါကြောင့်သူစဉ်းစားတွေးခေါ်သူဆန့်ကျင် Bernie မဲဆန္ဒနယ်မှထွက်လာရန် ထို့နောက်ဆန့်ကျင်သော BERNIE VOTE ကိုဖျတ်ပါ။ ကစားပါ။ >> Greg: မင်းဘယ်လိုထင်သလဲ >> Greg: မင်းဘယ်လိုထင်သလဲ သင် PERPLEX ကြည့်ရှုပါ။ သင် PERPLEX ကြည့်ရှုပါ။ သူ Bernie ကြည့်ရှုသွားပါလိမ့်မယ် သူ AN ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့် Bernie ပိုကောင်းအောင်လုပ်သွားတော့မည် ပိုကောင်းတဲ့ကြိုးစားမှုအားဖြင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကို။ သူ၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်အတူမိမိကိုယ်ကို AUTOCRAT ။ >> ဒါန: PETE ကြည့်ရှုတယ်။ >> ဒါန: PETE ကြည့်ရှုတယ်။ >> Juan: ငါ BRAD ထဲသို့ပြေး >> Juan: ငါ BRAD ထဲသို့ပြေးသူ 6'8 IS "။ IS 6'8 ">> ကနေဒီ: သောဘောလုံး >> ကနေဒီ: သောဘောလုံးအခြေအနေ။ အပြုသဘောဆောင်။ >> Juan: မင်းဘယ်တော့မှသတိမထားမိဘူး >> Juan: မင်းကိုငါဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးသတိပြုမိ ငါနှင့်သမ္မတတစ် ဦး ၏ပုံကိုကြည့်ပါ။ သူမလိုချင်ပါ သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်, သူသည်ငါ့ထံသို့နောက်ပုံတစ်ပုံကိုယူချင်တယ်။ ငါ့နောက်ပုံတစ်ပုံကိုယူပါ။ ငါဒီနည်းကိုအခြားစကားများ၌ကပြောသည် ငါဒီနည်းကိုအခြားစကားလုံးများတွင်ဤမျှလောက်မြင့်မားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ အမြင့်။ ငါဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုပြောပါလိမ့်မယ် ဤအရာသည်လူမှုမီဒီယာနှင့်တစ်ခု၏အသက်အရွယ်ဟုဆိုလိမ့်မည် လူမှုမီဒီယာနှင့်အမြဲတမ်းသောအရာများထဲမှတစ်ခု အစဉ်အမြဲဖြစ်ပျက်သောအရာသည်ငါ့အသက်အရွယ်ကိုငါ့အားပေးစေခြင်းငှါလှုပ်အဖြစ်အဖြစ် ကျွန်တော့်အသက်ကိုပေးလိုက်သည့်ကျွန်ုပ်အားရှော့ခ်သည်မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, BULLYING, အမည် - ခေါ်ဆိုခြင်း, ယဉ်ကျေးမှု IS NAME-CALL ခေါ်ယဉ်ကျေးမှုသည်ယခုအခါမူဝါဒအကန့်အသတ်ကြီးသည်။ ပို။ ပို။ ယခုမူဝါဒအကန့်သတ်, ဆွေးနွေးငြင်းခုံ, ပင် ARGUMENT မူဝါဒအကြောင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံလျှင်ပင်။ မူဝါဒ သင်ရုံမောင်း - Trump ရှိခဲ့ပါတယ် သင်ရုံကားမောင်း - TRUMP အလွန်ကောင်းသောလူမှုမီဒီယာ၏အကူအညီဖြစ်ခဲ့သည် အဲဒီမှာလုပ်နေကြသူအလွန်ကောင်းသောလူမှုမီဒီယာ၏အကူအညီ သမ္မတအနေဖြင့်လူမှုမီဒီယာကိုလုပ်ဆောင်နေသောသူများ သမ္မတနှင့်စစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာနှင့်လည်းလူမှုရေးမီဒီယာ နှင့်လှုပ်ရှားမှုမန်နေဂျာများနှင့်လည်းရုရှားလာသောအခါအဘယျသို့ ဘယ်အချိန်မှာရုရှားရောက်လာပြီးသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ သူတို့လုပ်ရန်အကြောင်းလား။ သူတို့ပေါ်တွင်ဖြောင့်ရပြီ သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သို့ရပြီ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုရပြီ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုရပြီ။ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပုလင်းကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ကြပြီးသူတို့ ပုလင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ကြပြီးသူတို့ပြီးနောက်သူတို့သွား။ သူတို့သွားကြ၏ လူတွေပြီးနောက်သူတို့သှား TRUMP ရဲ့အတိုက်အခံပြီးနောက်သွားကြ၏။ TRUMP'S OPPONENTS ပြီးနောက်။ SO BLOOMBERG ၏ GREEN ဒီတော့သင်ပွင်သောကြောင့် Bloom ၏အစိမ်းရောင်သူချပြီးသောကြောင့် သူသည်ပိုက်ဆံဒီနည်းကိုဂိမ်းထဲသို့သွင်းထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရပြီ ဒီနည်းကိုဂိမ်းထဲသို့ DEMOCRATS ဆိုတာဘာလဲ DEMOCRATS ဒီနည်းကိုအမှီပြု။ လာ, အနှေးလာကြ၏ ဒီနည်းကို, သင်၌ကစားရန်ရှိသည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှေးကွေး ဒီနည်းကိုကစားရန်သင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ဒီနည်းကိုဂိမ်း။ ငါမဟုတ်ရင်ဒီနည်းကပိုကောင်းပါတယ် ငါဒီထက်ပိုကောင်းတယ်, ငါလုပ်ဖို့မသွားပေမယ့်လုပ်တယ် အိုင်တီလုပ်ဖို့သွားပေမယ့်အမေရိကန်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့သြဇာသက်ရောက်ပါတယ် သက်ရောက်မှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု။ ယဉ်ကျေးမှု။ Negative မဖြစ်ခြင်း။ Negative မဖြစ်ခြင်း။ >> ကနေဒီ: Hillary သို့ >> ကနေဒီ: အဲဒီထောင်ချောက်မှာ Hillary ကျသွားတယ်။ သောထောင်ချောက်။ >> Greg: ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပျက် >> Greg: Bloomberg ပျက်ကွက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ။
ဘလွန်းဘက်ဂ်ကို Instagram လွှမ်းမိုးမှုများ ၀ ယ်နေသည့်အပေါ် Gutfeld
< start="8.71" dur="1.433"> >> Greg: မိုက်ကယ်ဘလွန်းသည်လူများကိုခေါ်ရန်ငွေပေးချေသည် >
< start="10.144" dur="1.401"> ပုံမှန်အားဖြင့်လူအများအားငွေပေးချေရန်ဝန်ခံသည် >
< start="11.579" dur="1.167"> INSTAGRAM တွင်ပုံမှန် MEM များတင်ရန်သြဇာညောင်းသူများ။ >
< start="12.747" dur="1.2"> INSTAGRAM အပေါ် MEMES ။ လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဘာလဲ။ >
< start="13.948" dur="1.3"> လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဘာလဲ။ အိုင်တီကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့်အရာ >
< start="15.249" dur="1.1"> ဘယ်သူမှမခေါ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပါ >
< start="16.35" dur="2.502"> မည်သူမျှယခုအချိန်တွင်သူတို့လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အတူဘယ်သူမှဖြစ်ကြ၏ >
< start="18.853" dur="0.633"> တစ် ဦး လူမှုရေးမီဒီယာအပြာရောင်ပုံနှိပ်နှင့်အတူဘယ်သူမှ >
< start="19.52" dur="3.436"> အပြာရောင်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နားထောင်ရန် >
< start="22.957" dur="0.299"> နားမလည်နိုင်အောင်နားထောင်ပေးဖို့။ >
< start="23.257" dur="2.702"> သူတို့ကို။ ဒါပေမဲ့သူကအမှန်တရား, ပင် WHO ကလူ >
< start="25.96" dur="1.501"> သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်၊ စိတ်ကူးယဉ်သူမည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည် >
< start="27.462" dur="2.268"> FASHION သည်ခေတ်မှီသော HIPSTERS များအနေဖြင့် A မှငွေကိုယူလိမ့်မည် >
< start="29.731" dur="1.433"> HIPSTERS သည်ဘီလီယံနာသူတစ် ဦး ထံမှငွေကိုယူသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ >
< start="31.199" dur="1.366"> ဘီလီယံနာသူ၊ သောအနည်းဆုံးအစီရင်ခံစာ၏ >
< start="32.567" dur="1.7"> ဒီနည်းကိုဒီကိစ္စကို၏အနည်းဆုံးအစီရင်ခံသတင်းများ။ >
< start="34.269" dur="1.933"> ဒီနည်းကိုဒီကိစ္စကို၏ဇာတ်လမ်း။ အလေးအနက်ထား, ဘယ်လိုကောင်းပြီ Trump >
< start="36.237" dur="1.234"> အလေးအနက်ထားရလျှင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတွက်ကောင်းကျိုးကိုမည်သို့ရရှိနိုင်သနည်း။ >
< start="37.472" dur="3.202"> နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတွက်လား သူသည်မိမိအသစ်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည် >
< start="40.675" dur="2.602"> သူသည် POSH အတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောငွေများပေးရန်သူ၏အသစ်သော NEMESIS ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည် >
< start="43.278" dur="0.866"> POSH အဖြစ်အပျက်များ၊ Perks နှင့်စျေးနှုန်းများအတွက်သန်းပေါင်းများစွာပေးဆပ်ရန် NEMESIS >
< start="44.146" dur="4.436"> အဖြစ်အပျက်များ, PERKS နှင့်စျေးနှုန်း။ >
< start="48.583" dur="1.801"> ဝန်ထမ်းများ Trump - အားလုံး STORMING ကဲ့သို့ဖြစ်၏ >
< start="50.385" dur="1"> Trump - အိုင်တီအားလုံးကိုကျော် Storming ကဲ့သို့။ >
< start="51.419" dur="1.301"> ထပ်။ ဒါပေမဲ့ Trump ကအိုင်တီရစေတယ်, >
< start="52.754" dur="4.303"> သို့သော်အပြင်းအထန်အိုင်တီလုပ်နေတာ, ဟုတ်တယ်လား? >
< start="57.058" dur="1.601"> ညာဘက် DOUG? >> ငါတစ်စုံတစ်ယောက်ကဲ့သို့သောဂုဏ်ယူပါတယ် >
< start="58.66" dur="1.233"> >> ငါကဲ့သို့သူ၏တစ်စုံတစ် ဦး ကသူ၏အချိန်ဖြုန်းနေသည်ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့် >
< start="59.895" dur="0.699"> သူ၏အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုအမေရိကသို့ယူဆောင်လာရန်ကြိုးစားနေသည် >
< start="60.628" dur="1.901"> AMERICA အတူတကွယူလာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ >
< start="62.564" dur="3.335"> အတူတကွ။ >> Greg: ပျော်ရွှင်သောယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိ၏။ >
< start="65.934" dur="1.366"> >> Greg: ပျော်ရွှင်သောယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိ၏။ သူထံမှအဘယျသို့အိုင်ဒီ >
< start="67.302" dur="1.067"> BLOOMBERG မှသူမည်သို့ရရှိနေသည်ကိုမသိပါ၊ သို့သော်အိုင်တီတစ် ဦး နှင့် တွဲဖက်၍ ကြည့်ခြင်း >
< start="68.403" dur="0.266"> Bloom, သို့သော်အိုင်တီစည်းချက်တွေအများကြီး။ >
< start="68.67" dur="4.236"> အများကြီး။ သူ၏ကောငျးသောအရင်းအနှီးရဲ့။ >
< start="72.908" dur="1.867"> သူ၏ကောငျးသောအရင်းအနှီးရဲ့။ သူ၏မကျြမှောကျ၌သူ့ကိုမြင်၏ >
< start="74.776" dur="1"> သူ့ကိုကြည့်နေတုန်းပဲ, သူ့တစ် ဦး ၏ညွှန်ကြားချက်၌သူ၏ FORTUNE >
< start="75.777" dur="4.103"> ONCOMING ORANGE TORNADO ၏လမ်းညွှန်မှုတွင် FORTUNE ။ >
< start="79.881" dur="2.335"> အော်ပရေတာ Toronto ONCOMING ။ သူသည်နံနက် Joe ရပြီ >
< start="82.25" dur="1.601"> HE နံနက်ခင်းပြန် Joe နှင့် Jeff ZUCKER ရရှိခဲ့ပါပြီ >
< start="83.885" dur="0.633"> ကြီးလေးတဲ့အသက်တာကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် Jeff ZUCKER ပြီးတော့သူတို့ရပြီ >
< start="84.552" dur="4.337"> LIFTING သူတို့ HERNIA အမာရွတ်များအဲဒီလိုသူတို့ကိုသက်သေပြခဲ့သည် >
< start="88.924" dur="1.2"> HERNIA ကဒါကိုသက်သေပြဖို့အသည်းအသန်ကြိုးစားခဲ့တယ် >
< start="90.159" dur="4.269"> ပြောဆိုရန် INSTAGRAM တွင်လူကြီးများအားငွေပေးချေရန်စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပါ >
< start="94.429" dur="0.666"> STUPID STUFF ကိုပြောရန် INSTAGRAM တွင်လူကြီးများ။ >
< start="95.13" dur="1.701"> မိုက်မဲပစ္စည်း။ ထို့အပြင်ဥက္ကES္ဌအနိုင်ရ >
< start="96.832" dur="1.266"> သမ္မတကိုလည်းအနိုင်ယူတယ်၊ >
< start="98.1" dur="1.734"> အမှန်။ တစ် ဦး က Trump စီးပွားရေး, မြင့်တက် >
< start="99.835" dur="1.1"> စီးပွါးရေးတိုးပွားလာသောဒီရေတက်ချိန်တွင်လှေများနှင့် ၀ ယ်သူအားလုံးကိုထမြောက်စေသည် >
< start="100.969" dur="3.87"> ဒီရေသည်လှေအားလုံးတက်ပြီးသင်အနည်းငယ်ရွက်လှေများကို ၀ ယ်ယူသည်။ >
< start="104.84" dur="1.968"> သင်အနည်းငယ်ရွက်လှေ။ Dana, ငါတို့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်, >
< start="106.842" dur="0.366"> Dana, ငါတို့သေးငယ်တဲ့လူဖြစ်ကြ, ငါတို့မဟုတ်လော >
< start="107.209" dur="2.134"> ငါတို့လား။ >> Dana: အနည်းငယ်သောကိုက် >
< start="109.344" dur="0.5"> >> Dana: အနညျးငယျ BIT တွင်အနည်းငယ် BIT ။ >
< start="109.878" dur="1.667"> အတိုချုပ်။ >> Greg: BEING ကျနော်တို့ KNOW သော >
< start="111.547" dur="0.932"> >> Greg: ငါတို့သိသောငါတို့အကြောင်းကိုသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးမထားခြင်း >
< start="112.514" dur="0.8"> မိမိအမြင့်အကြောင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်သိက္ခာ, ငါတို့တစ် ဦး သို့လှည့် >
< start="113.315" dur="2.435"> အမြင့်, ငါတို့တစ် ဦး စူပါပါဝါသို့လှည့်မှန်? >
< start="115.784" dur="3.703"> ညာဘက်, စူပါပါဝါ? သင် TIM O'Brien ON ခဲ့။ >
< start="119.521" dur="1"> သင် TIM O'Brien ON ခဲ့။ >> ဒါန: THE Bloomberg မှ >
< start="120.522" dur="0.733"> >> Dana: BLOOMBERG ကုမ္ပဏီမှအကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်နှင့် >
< start="121.289" dur="2.235"> အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ကျွန်မသူ့ကိုအကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ >
< start="123.559" dur="1.1"> သူ့ကိုအကြောင်းသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်။ >> Greg: ဒီတိပ်ကြီးထွားစေ။ >
< start="124.66" dur="8.808"> >> Greg: ဒီတိပ်ကြီးထွားစေ။ >> Dana: ရောဂါလက္ခဏာခံစားချက်တစ်ခု >
< start="133.502" dur="0.466"> >> Dana: ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကသူ့အမြင့်ဆုံးလား။ >
< start="133.97" dur="1.867"> သူ့အရပ်လား >> Mike IS TRUMP အရာအားလုံး >
< start="135.871" dur="1"> >> Mike သည်အရာခပ်သိမ်း TRUMP IN ၌၎င်း, TRUMP ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလဲ >
< start="136.872" dur="0.7"> IN နှင့်ဘာလဲ TRUMP ဒီနည်းကိုအပေါ်ရိုက်နှိပ်။ >
< start="137.573" dur="1.2"> ဒီနည်းကိုနှိပ်ပါ။ >> Greg: အနိုင်ပေး၏ Trump မျိုး >
< start="138.808" dur="1.266"> >> Greg: အနိုင်ပေး၏ Trump အမျိုးအစားထိုသူအပေါင်းတို့ပြောနေတာကြောင့် >
< start="140.075" dur="0.633"> ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိအမြင့်အကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည်။ >
< start="140.743" dur="2.201"> သူ၏အမြင့်အကြောင်း။ နည်းဗျူဟာဆိုတာဘာလဲ။ >
< start="142.945" dur="1.4"> နည်းဗျူဟာဆိုတာဘာလဲ။ >> ဒါန: ဒီနည်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် >
< start="144.346" dur="0.9"> >> Dana: ဒီဘလူးဘာ့ဂ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူအခုသူဖြစ်နေလို့ပါ >
< start="145.247" dur="1.234"> Bloomberg အကြောင်းယခုသူနေသောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုသခံရခြင်းကြောင့် >
< start="146.515" dur="1.734"> ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းကဲ့သို့အိုင်တီအကြောင်းပြောနေတာကြောင့်ကုသလျက်ရှိသည် >
< start="148.283" dur="1"> အားလုံးအကြောင်းအိုင်တီပြောနေတာနံပါတ်ထဲမှာရှေ့ပြေးကဲ့သို့ >
< start="149.317" dur="3.102"> ရှေ့ပြေးသူသည်နံပါတ်များ၌အမှန်တကယ်မဟုတ်သော်လည်းအကြောင်းမှာ >
< start="152.454" dur="1.3"> သူသည်အမှန်စင်စစ်မဟုတ်သော်လည်းဒီမိုကရက်စ်အားလုံး၏ကြောင့်ဖြစ်သည် >
< start="153.756" dur="0.799"> ဤအရာအလုံးစုံ၏, ဒီမိုကရက်တစ်ယခုအချိန်တွင်တစ် ဦး အခွင့်အလမ်းကိုရယူခြင်း >
< start="154.557" dur="2.234"> အခုအချိန်မှာ BLOOMBERG ပြောနေတာတာယာတွေကိုကန်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရပြီ >
< start="156.792" dur="2.068"> ဘလွန်းဘာ့ဂ်ပြောနေသည့်တာယာသူတ ဦး တည်းဖြစ်နိုင်သည် >
< start="158.861" dur="1.634"> သူအမှန်တကယ် IS TRUMP ကိုရိုက်နှက်နိုင်သူတစျခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် >
< start="160.496" dur="3.969"> တကယ်တော့သူတို့ဘာတွေဂရုစိုက်သလဲဆိုတာကိုဖြတ်ပြီးရိုက်တယ်။ >
< start="164.467" dur="1.7"> သူတို့ဘာတွေဂရုစိုက်သလဲ။ >> Greg: Bloomberg ပုံရသည် >
< start="166.168" dur="1.033"> >> Greg: Bloomberg သည်သူ၏ငွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာသုံးစွဲရန်ပုံရသည် >
< start="167.203" dur="1.367"> သူ၏ငွေကိုသူပေးနေသည့်အနေအထားတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာသုံးစွဲခြင်း >
< start="168.571" dur="1.934"> သူပေးသောသဘောအရအထူးသဖြင့် blank စစ်ဆေးမှုများ >
< start="170.506" dur="2.168"> သူကလိုလားနေသောကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ကွက်လပ်လေးစစ်ဆေးပါ >
< start="172.675" dur="1.233"> လူတိုင်းကြောင့်သူ့ကိုဖြတ်ထွက်လာလိုသောကြောင့်။ >
< start="173.943" dur="0.532"> ထွက်ပါ။ ဒါပညာရှိလား >
< start="174.51" dur="1.4"> ဒါပညာရှိလား >> ကနေဒီ: သူ Trump ချင်တယ် >
< start="175.945" dur="2.034"> >> ကနေဒီ: သူထွက်နိုင်ဖြတ်သူသမ္မတ SO PACED >
< start="178.013" dur="1.301"> OUT, သူသမ္မတအရှိန်အဟုန်သူတို့နောက်သို့ကြည့်ရှုအများကြီး >
< start="179.348" dur="1.567"> သူတို့ရဲ့နောက်သို့မျှော်ကြည့်နှင့်အများကြီးယနေ့ငါပဲ >
< start="180.917" dur="1.333"> AND ့ယနေ့ FOR, ငါမသွားဘူးကိုငါကြည့်ရှုပါ >
< start="182.284" dur="0.7"> သွားတော့မယ့်အရာကြည့်ကြည့်တော့ကျွန်မမှာဗိုက်ပူတယ်ဆိုရင်မသိဘူး >
< start="182.985" dur="3.936"> ဒီအကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ဒီနည်းကိုယူရန်ကျွန်ုပ်တွင်အစာအိမ်ရှိရင်သိပါ >
< start="186.922" dur="2.702"> ဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုယူပြီးတော့ဒီဗုံးကြဲလေပြီ၊ >
< start="189.625" dur="2.268"> ဗုံးခွဲမှု, Old ဒေါသအမျက်ကြီး New Yorkers ၏စုံတွဲတစ်တွဲ။ >
< start="191.894" dur="3.936"> နယူးယောက်။ ငါတစ် ဦး ကကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် >
< start="195.865" dur="2.601"> ငါထက်ငါအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာအငြင်းအခုံကြည့်ပါလိမ့်မယ် >
< start="198.501" dur="1.033"> လူမှုရေးနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှု >
< start="199.535" dur="5.605"> လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပြောင်းပြန်အရင်းအနှီးထို့နောက်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်အခြားစော်ကားမှုကို။ >
< start="205.174" dur="1.1"> တစ်ခုချင်းစီကိုစော်ကားမှုနှစ်ခုယောက်ျားတစ်ယောက်။ ငါအစားကြည့်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခု >
< start="206.309" dur="0.9"> ငါအလျင်အမြန်ကြည့်ရှုမယ်တစ်ခုမှာမြင့်သောဟာသပေမယ့်သော့ >
< start="207.21" dur="0.232"> အမြင့်ပေမယ့်ငါ့ကိုပါပဲ။ >
< start="207.477" dur="2.801"> ငါ သင်၏အသစ်သောအမည်ပြောင်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="210.313" dur="3.803"> သင်၏အသစ်သောအမည်ပြောင်သူသည် BLUMER လား။ >
< start="214.117" dur="0.633"> သူ့ကို, BLUMER? >> Greg: ငါအိုင်တီပြီးတော့ငါစတင်ခဲ့သည် >
< start="214.751" dur="1.567"> >> Greg: ငါကတီထွင်ငါမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ >
< start="216.319" dur="0.9"> မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငါတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းငွေပမာဏကို GET >
< start="217.22" dur="5.104"> ငါနေ့တိုင်း DOLLARS GET တစ်စုံတစ်ယောက်ကအိုင်တီပြောတယ်။ >
< start="222.325" dur="1.334"> အိုင်တီပြောတယ် >> Jesse: ကျွန်ုပ်အကြောင်းစဉ်းစားနေပါတယ် >
< start="223.693" dur="1.701"> >> Jesse: ငါ CAMEO အကြောင်းတွေးနေတယ်၊ >
< start="225.428" dur="6.038"> CAMEO, လမ်းဖြင့်။ ပိုက်ဆံလိုတယ် >
< start="231.501" dur="0.732"> ပိုက်ဆံလိုတယ် ဒီ MEMES FUNNY, ရှိသည် >
< start="232.268" dur="2.869"> ဤအသင်းသားများသည် FUNY ဖြစ်ကြသည်, အင်တာနက်ကိုသွားရပြီ။ >
< start="235.138" dur="1.734"> အင်တာနက်ပေါ်သွားပါ။ ဒီသီချင်းတွေအားလုံးကိုကြည့်ဖူးလား >
< start="236.873" dur="1.4"> ဒီရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေဟာဟီရာရီယိုလို့မြင်လား။ >
< start="238.308" dur="1.533"> ဟီလာရီ။ သငျသညျကိုဝယ်လျှင်အချက်များဖျက်သိမ်း >
< start="239.876" dur="1.701"> အချက်များကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့် အကယ်၍ သင်သည်အမှတ်ကောင်းများကို ၀ ယ်ပါကသင်ကမအေးပါ။ >
< start="241.578" dur="2.167"> အေးမြသောအချက်များ၊ သင်ကမအေးပါ။ ဒါပေမဲ့သူအသိအမှတ်ပြုသူမဟုတ်ခဲ့ပေ >
< start="243.747" dur="2.434"> ဒါပေမဲ့သူအသိအမှတ်ပြုသူသည်အေးမြမဟုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူသည် COOL ဝယ်ယူခဲ့သည် >
< start="246.182" dur="1.968"> အေးမြပြီးတော့သူက COOL တွေကိုဝယ်ပြီးသူရောင်းလိုက်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်တယ် >
< start="248.151" dur="0.433"> ဒါကြောင့်သူရောင်းလိုက်တဲ့ဒီဂရီအချက်အလက်များပြည့်စုံစွာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာပါ။ >
< start="248.618" dur="3.303"> တက် FUNNY BE ။ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, သူသည် Buzz >
< start="251.955" dur="0.633"> မေးခွန်းကသူရရှိမယ့် Buzz သောလူဖြစ်ကြ၏ >
< start="252.622" dur="3.703"> Buzz အပေါ်အခြေခံပြီးလူဖြစ်ကြ၏။ >
< start="256.359" dur="0.8"> Buzz အပေါ်အခြေခံ။ လူတွေက BLOOMBERG သောက်ချင်တယ် >
< start="257.16" dur="1.234"> လူတွေဘလမ်ဘာ့ဂ်နဲ့ SNIFF ကိုခုတ်ပြီးတာယာတွေကိုခုတ် >
< start="258.428" dur="1.901"> သူ့ကို SNIFF နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးတာယာတွေကိုဆုပ်ပြီးသူ့ကိုထိလိုက်ပြီးသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် >
< start="260.363" dur="1.334"> သူ့ကိုထိမိနှင့်သူ၏ခံစားရတယ်အခုအချိန်မှာသူစုစုပေါင်းရဲ့ >
< start="261.731" dur="1.634"> အခုအချိန်မှာသူအကွောငျးမသိသောစုစုပေါင်းရဲ့သူသညျစတငျရနိုင်သလား >
< start="263.4" dur="0.699"> မသိသောသူသည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် SUPER နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တူနိုင်သလား >
< start="264.101" dur="3.068"> ဒီနေ့ခေတ်မှာလိုမျိုးဒီပိတ်ဆို့သူတွေဆိုတာဘာလဲ။ >
< start="267.17" dur="1.2"> ဒီ Kandidates? ဒီနည်းကိုပိုက်ဆံအားလုံးနဲ့ဒီနည်းကို >
< start="268.371" dur="0.633"> ဤသူအပေါင်းတို့သည်ပိုက်ဆံအပေါင်းတို့နှင့်ဒီနည်းကို HIP နှင့်ပြီးတော့မိနစ် >
< start="269.038" dur="2.569"> အသံနှင့်ထို့နောက်မိနစ်ပိုင်းမဲဆန္ဒရှင်များမဲပေးစတင်, သူတို့ပျက်ကွက်။ >
< start="271.608" dur="2.735"> မဲဆန္ဒရှင်များမဲပေးစတင်, သူတို့ပျက်ကွက်။ ဒါကြောင့်ငါသူသွားစဉ်းစားပါ >
< start="274.377" dur="3.136"> ဒါကြောင့်သူစဉ်းစားတွေးခေါ်သူဆန့်ကျင် Bernie မဲဆန္ဒနယ်မှထွက်လာရန် >
< start="277.547" dur="3.703"> ထို့နောက်ဆန့်ကျင်သော BERNIE VOTE ကိုဖျတ်ပါ။ >
< start="281.284" dur="1.901"> ကစားပါ။ >> Greg: မင်းဘယ်လိုထင်သလဲ >
< start="283.186" dur="0.533"> >> Greg: မင်းဘယ်လိုထင်သလဲ သင် PERPLEX ကြည့်ရှုပါ။ >
< start="283.72" dur="3.803"> သင် PERPLEX ကြည့်ရှုပါ။ သူ Bernie ကြည့်ရှုသွားပါလိမ့်မယ် >
< start="287.524" dur="1.801"> သူ AN ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့် Bernie ပိုကောင်းအောင်လုပ်သွားတော့မည် >
< start="289.326" dur="2.001"> ပိုကောင်းတဲ့ကြိုးစားမှုအားဖြင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကို။ >
< start="291.328" dur="1.767"> သူ၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်အတူမိမိကိုယ်ကို AUTOCRAT ။ >> ဒါန: PETE ကြည့်ရှုတယ်။ >
< start="293.096" dur="2.401"> >> ဒါန: PETE ကြည့်ရှုတယ်။ >> Juan: ငါ BRAD ထဲသို့ပြေး >
< start="295.499" dur="8.641"> >> Juan: ငါ BRAD ထဲသို့ပြေးသူ 6'8 IS "။ >
< start="304.141" dur="0.699"> IS 6'8 ">> ကနေဒီ: သောဘောလုံး >
< start="304.875" dur="1.633"> >> ကနေဒီ: သောဘောလုံးအခြေအနေ။ >
< start="306.543" dur="0.766"> အပြုသဘောဆောင်။ >> Juan: မင်းဘယ်တော့မှသတိမထားမိဘူး >
< start="307.311" dur="1.734"> >> Juan: မင်းကိုငါဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးသတိပြုမိ >
< start="309.079" dur="1.1"> ငါနှင့်သမ္မတတစ် ဦး ၏ပုံကိုကြည့်ပါ။ သူမလိုချင်ပါ >
< start="310.214" dur="1.433"> သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်, သူသည်ငါ့ထံသို့နောက်ပုံတစ်ပုံကိုယူချင်တယ်။ >
< start="311.682" dur="1.333"> ငါ့နောက်ပုံတစ်ပုံကိုယူပါ။ ငါဒီနည်းကိုအခြားစကားများ၌ကပြောသည် >
< start="313.05" dur="2.001"> ငါဒီနည်းကိုအခြားစကားလုံးများတွင်ဤမျှလောက်မြင့်မားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ >
< start="315.085" dur="1"> အမြင့်။ ငါဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုပြောပါလိမ့်မယ် >
< start="316.119" dur="3.803"> ဤအရာသည်လူမှုမီဒီယာနှင့်တစ်ခု၏အသက်အရွယ်ဟုဆိုလိမ့်မည် >
< start="319.923" dur="0.7"> လူမှုမီဒီယာနှင့်အမြဲတမ်းသောအရာများထဲမှတစ်ခု >
< start="320.624" dur="2.735"> အစဉ်အမြဲဖြစ်ပျက်သောအရာသည်ငါ့အသက်အရွယ်ကိုငါ့အားပေးစေခြင်းငှါလှုပ်အဖြစ်အဖြစ် >
< start="323.393" dur="3.87"> ကျွန်တော့်အသက်ကိုပေးလိုက်သည့်ကျွန်ုပ်အားရှော့ခ်သည်မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ >
< start="327.264" dur="3.002"> စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, BULLYING, အမည် - ခေါ်ဆိုခြင်း, ယဉ်ကျေးမှု IS >
< start="330.267" dur="4.237"> NAME-CALL ခေါ်ယဉ်ကျေးမှုသည်ယခုအခါမူဝါဒအကန့်အသတ်ကြီးသည်။ >
< start="334.538" dur="0.7"> ပို။ ပို။ ယခုမူဝါဒအကန့်သတ်, ဆွေးနွေးငြင်းခုံ, ပင် ARGUMENT >
< start="335.239" dur="0.332"> မူဝါဒအကြောင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံလျှင်ပင်။ >
< start="335.573" dur="4.303"> မူဝါဒ သင်ရုံမောင်း - Trump ရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="339.91" dur="2.802"> သင်ရုံကားမောင်း - TRUMP အလွန်ကောင်းသောလူမှုမီဒီယာ၏အကူအညီဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="342.746" dur="1.801"> အဲဒီမှာလုပ်နေကြသူအလွန်ကောင်းသောလူမှုမီဒီယာ၏အကူအညီ >
< start="344.548" dur="1.134"> သမ္မတအနေဖြင့်လူမှုမီဒီယာကိုလုပ်ဆောင်နေသောသူများ >
< start="345.716" dur="0.9"> သမ္မတနှင့်စစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာနှင့်လည်းလူမှုရေးမီဒီယာ >
< start="346.65" dur="0.933"> နှင့်လှုပ်ရှားမှုမန်နေဂျာများနှင့်လည်းရုရှားလာသောအခါအဘယျသို့ >
< start="347.585" dur="2.067"> ဘယ်အချိန်မှာရုရှားရောက်လာပြီးသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ >
< start="349.654" dur="1.633"> သူတို့လုပ်ရန်အကြောင်းလား။ သူတို့ပေါ်တွင်ဖြောင့်ရပြီ >
< start="351.288" dur="0.366"> သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သို့ရပြီ။ >
< start="351.655" dur="4.837"> စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုရပြီ။ >
< start="356.494" dur="6.372"> တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုရပြီ။ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="362.867" dur="1.2"> ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပုလင်းကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ကြပြီးသူတို့ >
< start="364.068" dur="1.534"> ပုလင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ကြပြီးသူတို့ပြီးနောက်သူတို့သွား။ သူတို့သွားကြ၏ >
< start="365.603" dur="4.703"> လူတွေပြီးနောက်သူတို့သှား TRUMP ရဲ့အတိုက်အခံပြီးနောက်သွားကြ၏။ >
< start="370.308" dur="0.966"> TRUMP'S OPPONENTS ပြီးနောက်။ SO BLOOMBERG ၏ GREEN >
< start="371.275" dur="2.735"> ဒီတော့သင်ပွင်သောကြောင့် Bloom ၏အစိမ်းရောင်သူချပြီးသောကြောင့် >
< start="374.044" dur="2.435"> သူသည်ပိုက်ဆံဒီနည်းကိုဂိမ်းထဲသို့သွင်းထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရပြီ >
< start="376.514" dur="1.567"> ဒီနည်းကိုဂိမ်းထဲသို့ DEMOCRATS ဆိုတာဘာလဲ >
< start="378.082" dur="1.834"> DEMOCRATS ဒီနည်းကိုအမှီပြု။ လာ, အနှေးလာကြ၏ >
< start="379.951" dur="1.066"> ဒီနည်းကို, သင်၌ကစားရန်ရှိသည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှေးကွေး >
< start="381.018" dur="0.433"> ဒီနည်းကိုကစားရန်သင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ >
< start="381.485" dur="1.4"> ဒီနည်းကိုဂိမ်း။ ငါမဟုတ်ရင်ဒီနည်းကပိုကောင်းပါတယ် >
< start="382.887" dur="3.736"> ငါဒီထက်ပိုကောင်းတယ်, ငါလုပ်ဖို့မသွားပေမယ့်လုပ်တယ် >
< start="386.624" dur="1.5"> အိုင်တီလုပ်ဖို့သွားပေမယ့်အမေရိကန်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့သြဇာသက်ရောက်ပါတယ် >
< start="388.159" dur="0.299"> သက်ရောက်မှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု။ >
< start="388.493" dur="3.335"> ယဉ်ကျေးမှု။ Negative မဖြစ်ခြင်း။ >
< start="391.863" dur="0.833"> Negative မဖြစ်ခြင်း။ >> ကနေဒီ: Hillary သို့ >
< start="392.73" dur="3.503"> >> ကနေဒီ: အဲဒီထောင်ချောက်မှာ Hillary ကျသွားတယ်။ >
< start="396.234" dur="0.9"> သောထောင်ချောက်။ >> Greg: ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပျက် >
< start="397.135" dur="1.634"> >> Greg: Bloomberg ပျက်ကွက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ။ >